Sida loo rakibo barnaamijyada adoo adeegsanaya iTunes | Wararka IPhone
Qaybta labaad ee taxanaheennii casharrada ee iTunes. Markii ugu horreysay waxaan bixinnay fikrado aasaasi ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo iTunes, tabka kooban ee iPhone-keena, iwm. Markan waxaan u sii galaynaa arinka waxaanan sharxeynaa sida codsiyada looga maareeyo iTunes. Rakib, ka-saar, cusbooneysii, u dhaqaaq faylyada, dib-u-beddel faylDhammaan tan iyo in ka badan ayaa laga samayn karaa kombuyuutarkeena waxaanna ku sharxi doonnaa sida ku jirta fiidiyaha soo socda.
In muddo ah hadda, adeegsiga iTunes si loo maareeyo barnaamijyadeena ayaa gebi ahaanba lagama maarmaan ah maadaama aan adeegsan karno qalabkeena. Cusbooneysiinta otomaatiga ah, soo degsashada otomaatiga ah iyo suurtagalnimada helitaanka barnaamijyadeena aan iibsanay si aan si deg deg ah u soo dejino waxay ka dhigan tahay in qaar badani iloobeen iTunes ujeeddooyinkan. Laakiin had iyo jeer waa muhiim oo xiiso leh in la awoodo waxqabad kaydinta dhammaan barnaamijyadeenna kombuyuutarka, Maaddaama ay dhacdo in la soo celiyo qalabkeenna, rakibidda codsiyada ayaa aad uga dhakhso badan haddii aan ku samaynno adigoo ku soo dejineyno WiFi. Horey ayey u fududahay in la helo dhowr codsi oo lagu rakibay dhowr gig oo karti leh, soo dejintooduna ay gaabis ku tahay inta badan isku xirnaanta jira.
Sidoo kale ma iloobi karno xulashooyinka ay iTunes na siiso si aan u dhaqaajino astaamaheena, abuurno faylal, u magacawno, ama xitaa ka tirtirno codsiyada horudhaca ah ee ay naga siiso kombuyuutarradeena dhinaca midig. Waxaad ku arki kartaa intaas oo dhan iyo inbadan oo ka mid ah fiidiyaha la socda maqaalkan. Waan sii wadi doonnaa inaan ku falanqeyno codsigan casharrada mustaqbalka si aad u aragto sida muusikada, fiidiyowyada, nuqullada nuqul, iwm loo maareeyo, oo markaa ay u suurtagasho inay ka faa'iideystaan ​​dhammaan xulashooyinka ay iTunes siiso dadka isticmaala macruufka oo naga saari kara wax ka badan hal dhibaato oo wajihi kara xog luminta iyo naga caawi inaan helno isticmaalka ugu badan ee qalabkeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iTunes » Sida loo rakibo barnaamijyada adoo adeegsanaya iTunes